Technorati ọkwa WordPress ngwa mgbakwunye Version 2.0.4 wepụtara | Martech Zone
Sunday, Eprel 22, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Emechara m dozie esemokwu na Technorati ọkwa WordPress ngwa mgbakwunye nke na-edozi esemokwu na enweghị ike ide ma ọ bụ mepee faịlụ nchekwa. M tinye a cache subdirectory na ngwa mgbakwunye na ugbu a na-echekwa echekwara faịlụ na ndekọ na.
Ihe mgbakwunye ahụ ka chọrọ PHP5 + (MfeXML) Na curl ọba akwụkwọ. Ọ bụrụ na onye na-elekọta gị enweghị ihe ọhụụ na kachasị, aga m agba gị ume ịkwalite na onye ọhụụ ọhụrụ. You'll ga-ahụ dere a afọ n'efu nke nnabata na onye nnabata m RSS ndepụta.
Ọzọkwa, Ana m arụ ọrụ na ịkwalite ngwa mgbakwunye a na ụdị eserese ọzọ (ekele Teknụzụ maka enyemaka ụfọdụ!). N'oge m niile mapụtara - n'ezie!
Naanị m tinye blog gị na fav.
Aha njirimara Technorati m bu gavino.
Nwere ike ịgbakwunye blog m na favụ gị site na ịpị njikọ a.
ị nwere ike iche na m bụ nzuzu mana abughi m onye IT.
M wụnye Technorati Rank plugin ma m na-enweta ozi a.
Ga-enwe ike ịgwa m ebe m na-emehie?
Ọbụghị nzuzu niile chinam! Ihe mgbakwunye ahụ na-arụ ọrụ site na ịdepụta otu nsonaazụ ya na ndekọ ndekọ ka ọ ghara ịkpọtụrụ Technorati oge ọ bụla. A na-akpọ nke a 'caching'. N'okwu a, ọ na-egosi na ngwa mgbakwunye enweghị ikikere kwesịrị ekwesị iji dee akwụkwọ mgbakwunye / cache ndekọ. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịtọ ikikere na ndekọ ahụ, ọ ga-agbanwe ka ha nwee ikike zuru oke (CHMOD 777).
Daalụ maka ngwa mgbakwunye WP gị, Douglas. Achọpụtara m obere ahụhụ na nchịkwa nchịkwa na ị nwere ike ị mezie: oghere ịhọrọ igbe anaghị arụ ọrụ nke ọma. Nke a bụ n'ihi akara gị:
ma ọ bụrụ na (($ wptr_hours == "4") || ($ wptr_hours = “”))
ịtọ nhọrọ ka ọ bụrụ na ịghara ịtọzigharị. Ekwenyesiri m ike na ị ga-ahụ na ịchọrọ 'ntụnyere' na okwu nke abụọ, ọ bụghị 'ọrụ' - nke na-ewepụ uru nke $ wptr_hours, yabụ anaghị ahọrọ nke ọ bụla n'ime nhọrọ ma ị ga - ejedebe na '1 'na ndabara. Olileanya na a na-enyere aka!
Daalụ maka ịchọta Dan! Emeela m mgbanwe na bulite v 2.0.5:
Ọ bụrụ na (($ wptr_hours ==? 4?) || ($ wptr_hours === efu))
Jul 7, 2007 na 10: 00 AM
Daalụ maka ngwa mgbakwunye a Douglas.
Enwere m ike ịhụ na blọọgụ gị nwere ọnọdụ goode na Technorati. Jide ka iji!
Jul 7, 2007 na 10: 35 AM